स्थिर अलिसिन फॉर्मूलेसनहरूको लागि अल्ट्रासोनिक Nanoliposomes - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
एलिसिन बायोएक्टिभ यौगिक हो, जुन ताजा लसुनको लौंगबाट निकाल्न सकिन्छ। Allicin गिरावट को खतरामा छ र त्यसैले एक स्थिर पूरक फारममा तर्नु पर्छ दीर्घकालीन शक्तिशाली सूत्र प्राप्त गर्नका लागि। नानोलिपोसोमहरूमा अलिकसिनको अल्ट्रासोनिक इन्पेप्सुलेसनले एलिसिनलाई गिरावटको बिरूद्ध बचाउँछ र टिकाऊ ड्रग रिलीजको परिणाम दिन्छ।
एलिसिन उत्पादनहरू जस्तै पूरकहरूको निर्माण एलिसिनको अस्थिरताको कारण चुनौतीपूर्ण कार्य हो। एलिसिन ऑक्सीकरण र तापक्रमप्रति संवेदनशील हुन्छ, मतलब एलिसिन सामग्री समय र तापमानको साथ घट्यो। विशेष गरी प्रक्रिया र भण्डारण तापमान महत्वपूर्ण कारकहरू हुन्। Allicin गतिविधि 4ºC मा तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ जब कोठाको तापक्रममा भण्डारित एलिसिनको तुलनामा (करीव २२ºC)। यसको रासायनिक आधा जीवन लगभग4डिग्री सेल्सियस थियो। १ 150० दिन, जब कोठाको तापमानमा यो लगभग थियो। २० दिन
Allicin sis को प्रि-प्रोसेसिंग अर्को महत्वपूर्ण कारक हो जसलाई विचार गर्नुपर्दछ। एलिसिन जमिन लसुनको भन्दा काटिएको लसुनमा बढी स्थिर देखिन्छ।
जब यो अल्ट्रासोनिक निकासीको कुरा आउँछ, ठूलो सतह क्षेत्र उपलब्ध छ जब सामान्यतया Sonication अधिक प्रभावी छ, जब लसुन बारी बारी छ। तसर्थ, लसुनको इष्टतम प्री-ट्रीटमेन्ट (पिसाई बनाउने बनाउने) अतिरिक्त प्यारामिटरको रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेछ विशिष्ट सोनिकेशन प्रक्रिया प्यारामिटरहरू बाहेक। लसुनबाट अल्ट्रासोनिक allicin निकासीको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
दीर्घकालिक स्थिरीकरणको लागि एलिसिन लिपोसोमहरू
एलिसिन थर्मल डिग्रेडेसनको खतरामा छ र एसिडिक (pH and. and र कम) सर्तहरूमा नष्ट भयो। Allicin अर्क र पूरकहरूको तसर्थ एक भनिन्छ स्थान मा भण्डारण गर्नुपर्छ, अर्थात् फ्रिज, लगभग मा। 4ºC लगभग एक लामो आधा जीवन स्थिरता सुनिश्चित गर्न। 1 वर्ष।
लिपिड न्यानो क्यारियरहरू जस्तै लिपोसोम्स र न्यानोमुलसन जेलमा एलिसिनको बनोटको निर्माणले एल्फिसिन उत्पादहरूको शेल्फ लाइफ र स्थिरतालाई विस्तार गर्दछ।
Allicin- लोड Liposomes को Ultasonic सूत्र
लु एट अल। (२०१ 2014) अल्ट्रासोनिक सहायताले रिभर्स-चरण वाष्पीकरण प्रयोग गरेर एलिसिन नानोलिपोसोमहरूको सफल तयारी रिपोर्ट गर्नुहोस्। निम्न प्यारामिटरहरू प्रयोग गरियो: c.70०: १ को लेसिथिन-एलिसिन अनुपात, ith.7777: १ को लेसिथिन-कोलेस्ट्रॉल अनुपात, अल्ट्रासोनिक समय min मिनेट। Sec० सेकेन्ड, कार्बनिक चरण-जली चरण चरण अनुपात 2.०२: १. अल्ट्रासोनिक एन्पेप्सुलेटेड एलिसिनको एन्ट्रापमेन्ट दक्षता575.२० ± ०..6२% थियो भने १ size5.२7 ± १.1.१ एनएमको एलिसिन नानोलिपोसोमको औसत आकारको साथ। अल्ट्रासोनिक रूपमा तयार गरिएको एलिसिन नानोलिपोसोमहरूले निरन्तर ड्रग रिलीज फिचर गर्दछ, जसले समयको विस्तारित अवधिमा सक्रिय अवयवको स्थिर रिलीज सक्षम गर्दछ। यसले ड्रग्स र सप्लीमेन्टहरूको प्रशासनलाई सजिलो बनाउँदछ र साइटोटोक्सिक प्रभावहरू कम गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक Liposome तयारी को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्!
एक लिपोसोमको संरचना: हाइड्रोफिलिक हेड र हाइड्रोफोबिक / लिपोफिलिक पुच्छरहरूको साथ एक्वास कोर र फस्फोलीपिड बिलेयर।
अल्ट्रासोनिक रूपमा नानोममुल्सन जेलहरू एलिसिनको साथ
पोलीथिलीन ग्लाइकोल प्रयोग गर्ने नानोममुल्सन जेलहरूको एलिसिन औषधि वाहकको रूपमा सफलतापूर्वक परीक्षण गरियो पानीको घुलनशीलता र एलिसिनको जैवउपलब्धता सुधार गर्न। (सीएफ रञ्न्जबार एट अल।)
अल्ट्रासोनिक नानो-पायसीकरण को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्!
Liposomal ईन्केपुलेसन को लागी उच्च प्रदर्शन Ultrasonicators
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स प्रणालीहरू औषधि र पूरक उत्पादनमा प्रयोग हुने विश्वसनीय उपकरणहरू हुन् जुन एन्टीओक्सिडन्टहरू, पोलिफेनोलहरू, फ्याट्टी एसिडहरू, भिटामिनहरू, पेप्टाइड्स, र अन्य बायोएक्टिभ यौगिकहरूले भरिएका उच्च-गुणस्तरको लाइपोसोमहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछन्। आफ्ना ग्राहकहरूको मागहरू पूरा गर्न, हिलस्चर लेपोजोमल फॉर्म्युलेसनको उच्च-खण्डको उत्पादनको लागि पूर्ण रूपमा औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरूमा कम्प्याक्ट ह्यान्ड-लेबल्ड होमोजेनिजर र बेन्च-शीर्ष अल्ट्रासोनिकेटरहरूबाट अल्ट्रासोनिकेटर्स आपूर्ति गर्दछ। अल्ट्रासोनिक लिपोसोम फॉर्म्युलेसन ब्याचको रूपमा वा निरन्तर इनलाइन प्रक्रियाको रूपमा चलाउन सकिन्छ। तपाईंको लाइपोसोम उत्पादनको लागि इष्टतम सेटअप सुनिश्चित गर्न अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडहरूको एक विस्तृत श्रृंखला (प्रोब वा सीsहरू पनि भनिन्छ) र रिएक्टर जहाजहरू उपलब्ध छन्। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको मजबुतताले भारी शुल्क र मांग वातावरणमा २ 24/ duty अपरेशनको लागि अनुमति दिन्छ।
एलिसिन यौगिक हो जुन लसुन कुचुरियो वा काटियो भने। आहार पूरक फारममा उपलब्ध छ, यो सूजन कम गर्न र antioxidant लाभ प्रदान गर्न भेटिएको छ।
ताजा लहसुनमा एक एमिनो एसिड हुन्छ जसलाई अलिइन भनिन्छ। जब लौंग कुल्चियो वा काटियो, एक एन्जाइम, alliinase, जारी हुन्छ। Alliin र alliinase allicin गठन गर्न अन्तरक्रिया गर्दछ, जो लसुन को प्रमुख जैविक रूप से सक्रिय घटक मानिन्छ।
लसुनको अर्गोसल्फर यौगिकहरू जस्तै एलिसिन उनीहरूको फार्माकोलॉजिकल प्रभावहरूको लागि प्रख्यात छन् एन्टिऑक्सिडिभ, एन्टि-प्रोटोजोअल, एन्टी-इन्फ्लेमेटरी, एन्टिमाइक्रोबियल, एंटीकेन्सर, र कार्डियोप्रोटेक्टिव प्रभावहरू सहित।